Gallan oo ku dhawaaqay in gobolku nabad yahay | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Gallan oo ku dhawaaqay in gobolku nabad yahay
Gallan oo ku dhawaaqay in gobolku nabad yahay
Guddoomiyaha gobolka Bari ee maammulka Puntland, Cabdisamad Maxamed Gallan ayaa markii ugu horreysay si rasmi ah shaaca uga qaaday in Galgala iyo guud ahaan dhulka ku teedsan Goolis aysan imminka ka jirin wax khatar ah oo la xiriira dhinaca ammaanka, maadaama buu yiri isaga iyo wefdi la socday ay si nabad ah ku booqdeen buurahaasi.
Cabdisamad Maxamed Gallan oo uu socdaalkaasi ku wehlinayay taliyaha guud ee ciidanka daraawiishta Puntland Gen. Siciid Maxamed Xirsi ‘Siciid Dheere’ ayaa xaqiijiyay in dagaalyahanka xarakada Shabaab ee Soomaaliya laga wada saaray dhammaan deegaanada hoos yimaada Puntland, wax walaac ahna aysan ka qabin hawlgallada weli lagu sii baacsanayo ururkaasi.
Sidoo kale, Gallan wuxuu carabka ku adkeeyay in ammaanka gobolku uu yahay mid sugan oo aanu laga cabsi qabin firxadka Al-shabaab inay dib ugu soo dhuuntaan gudaha magaalooyinka waaweyn oo ay maammulka iyo shacabkuba diyaar u yihiin inay gacan bir ah ku qabtaan cid kastoo dhibaato la doonaysa reer Puntland.
Arbacadii lasoo dhaafay ayey ciidamadda Puntland kala wareegeen Shabaab deegaanka Galgala oo qiyaastii 30km bari kaga beegan magaalo xeebeedka Boosaaso, halkaasoo sida la sheegayo loo soo marin jiray shixnado hub ah oo ay ka heli jireen xulafadooda ka dagaallamaya wadandaasi Yemen.
Galgala ayaa ahayd goobta kaliya oo Shabaab kaga sugnaayeen dawlad gobolleedkaasi waqooyi bari Soomaaliya ee Puntland.
Previous articleShabaab oo firxadkooda looga digayo deriska
Next articleJ/hoose oo uu ka dhacay dagaal khasaare geystay